बच्चाको दाँत आउदा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरु- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २१, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — केहि दिन अगाडिको कुरो हो, मेरा एक जना मित्रको फोन आयो । उनले भने, डा. साब मेरो सानो नौ महिनाको छोरा, पातलो हरियो दिशा चार, पाँच पटक गर्नुका साथै ज्वरो पनि छ । स्वभाव एकदम चिडचिडापन छ । रोई रहन्छ, केहि गर्दा पनि चुप लाग्दैन । काखमा लिएर घुमाउदा मात्र चुप लाग्छ । बच्चाको डाक्टरलाई देखाएर औषधि ख्वाएको केहि भएन । के होमियोप्याथिमा यसको उपचार छ?
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ १६:४४
धादिङ यातायातका अध्यक्ष पक्राउ
धादिङ — सरकारी नीतिविपरीत सिन्डिकेटलाई समर्थन गर्ने धादिङ यातायात संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनी बिचबजारस्थित पसलबाट पक्राउ परेका हुन् ।
जिल्लामा रहेका ३ वटा यातायात समितिहरुमध्ये सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गरिएको ग्रामीण यातायात र संयुक्त यातायात व्यवसायीले बन्दको अवज्ञा गर्दै काठमाडौंसम्मको यातायात दिनभर सञ्चालन राखे पनि धादिङ यातायातले बन्द गरेको थियो ।
जिल्लाबाट पोखरा तथा नारायणगढ सञ्चालन हुने नियमित सेवा पनि बन्द छन् ।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ १६:२७